Magaalada Addis Ababa oo noqotay Goobta lagu Go,aamiyo masiirka iyo Mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee maanta nool – Xeernews24
Nov 26, 2016 (XeerNews24)
Qorshaha Imaaraadka oo ahaa in xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doorto musharax ay wadato, kana hor joogsato madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Xasan Sheekh inuu dib u soo laabto ayaa taageero ka helay dowladda Kenya, taasoo ka cadhaysiisay dawlada Itoobiya oo lug weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya ee hor iyo hagaag beeshay.
Waxaa dhowaan tegay magaalada Addis ababa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo wararku sheegayaan inay Itoobiya u yeedhay kadib socdaalkiisii Nairobi oo Itoobiya kala soo hadashay qorshaha dowladda cusub.
Sidoo kale waxaa magaalada Addis Ababa looga yeedhay oo iminka ku sugan Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid oo isagu la filayo inuu yahay ninka ay wataan Imaaraadka Carabta iyo Kenya, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan, Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo musharax C/raxmaan C/shakuur Warsame oo dhammaantood loogu yeedhay arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Itoobiya ayaa la sheegay inay si weyn uga hortimid qorshaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo xilli danbe si farsmaysan ugu soo beegtay faragelinteeda, waxaana la ogyahay in socdaalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Xasan Sheekh ku tegay Itoobiya uu ka dambeeyay shirkii Dubai ee Imaaraadka Carabta ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaalida.
Cabdi Iley oo Mar kale shacabka reer Sitti balan qaad been ah ku Daacay Xoogaga Hiil Walaal ee Djibouti oo Xoog iyo Qasab ku joojiyey Dagaal Beelee...